काठमाडौं । चिकित्सकहरुको साझा संस्था युनाईटेड नेशनल मेडिकल सोसाईटी अफ नेपालको बिधिवत रुपमा उद्घाटन भएको छ । २०७४ सालमा स्थापना गरिएको सो संस्थाको शनिबार स्वास्थय तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवले उदघाटन गरे । ‘राष्ट्र विकासका लागि हरेक नेपाली जनतामा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता’ भन...
महिलाका अति संबेदनशील समस्याहरु : ‘भन...
मंसिर २३, 2075 काठमाडौं । योनि चिलाउने : यो महिलाहरुमा हुने सामान्य समस्या हो । भन्नपनि लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या विकराल बन्दै जाने । यो समस्यामा सेतो पानी बग्ने तथा योनिका भित्ताहरुमा चिलाउने हुन्छ । चूर्णा परे पनि गुह्द्धारबाट सर्दैसर्...
तिलाचौरमा गरियो सरसफाई
मंसिर २२, 2075 महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका जनप्रतिधि र सुरक्षाकर्मीसहित विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले तिलाचौरमा सरसफाई गरेका छन् । समुदाय प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिका स्तरीय पालिका समितिको अगुवाईमा तिलाचौरमा सरसफाई गरिएको छ ...
महिनावारी नै नभै गर्भ रहेको देखियो, अ...
मंसिर २०, 2075 काठमाडौंं । म ३२ वर्षीया गृहिणी हुँ । मेरी जेठी छोरी १५ वर्षकी भइन् । विगत दुई वर्षदेखि मैले तीनमहिने सुई प्रयोग गर्दै आएकी थिएँ । तर सुईले महिनावारी रोकिएपछि मैले गत जेठमा सुई लगाइनँ । सुई छोडेको चार महिना भए पनि मेरो मह...
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका दिवसमा मह...
मंसिर १९, 2075 काठमाडौं । १५ औं महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका दिवसका अवसरमा लामो‌ समयदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रुपमा सेवा गरी जनप्रतिनिधि भएका ७ जना महिला सम्मानित भएका छन् । बुडानिलकण्ठ नगरपालिकाद्धारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुलाई...
स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको भूमिकाको उच्च...
मंसिर १९, 2075 महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम सरकारका उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्यमन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सरकारले पहिलो पूरक बजेटबाट स्वयम् सेविकाका मागलाई सम्बोधन गरेको बताएका छन् । १५ औं महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका दिवसको अवसर...
मृगौला पीडित रसाइली बचाउ अभियान तीव्र
मंसिर १९, 2075 काठमाडौं । दुबै मृगौला फेल भएका प्रकाश रसाइलीलाई बचाउन प्रकाश रसाइली बचाउ अभियान तीव्र पारिएको छ । अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका वडा नं. १, तल्लो रानिचौर गैराका १८ वर्षीय प्रकाशको दुबै मृगौला फेल भई ७ महिनादेखि मानव अंग ...
प्रदेश नं २ मा कुपोषणको समस्या बढ्दै
मंसिर १८, 2075 वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ मा पोषणयुक्त खानेकुराको अभावको कारण कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत कुपोषण हटाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । कुपोषण...
आज विश्व एड्स दिवस देशभर मनाउँदै
मंसिर १५, 2075 काठमाडौं । सरकारले शनिबार विश्व एड्स दिवस देशभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउँदै छ । राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी शनिबार विश्व एड्स दिवस जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचा...
तपाई सुन्दर हुन चाहनुहुन्छ ? अब घरेलु...
मंसिर १४, 2075 काठमाडौं । मानिसको सौन्दर्य सुरूमा अनुहारबाट झल्कन्छ। व्यक्तित्व वयान गर्न पनि अनुहारको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ। सुन्दर देखिन मानिसहरू गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयत्नहरू गर्छन्। मानिसहरू हजारौ रूपैया खर्चिएर अनुहा...
तपाईको पिसाब रोक्ने बानि छ ? होसियार ...
मंसिर १३, 2075 काठमाडौं । पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया हो । पसिनाजस्तै पिसाबका माध्यमबाट पनि शरीरका लागि अनावश्यक तत्वहरु बाहिर निस्कन्छन् । जसलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र फ्याँक्नुपर्छ । पिसाब थैली भरिनेबित्तिकै स्नायुप्रणाली...
गर्भवती महिलाले के के खाने ?
मंसिर १३, 2075 काठमाडैं । गर्भावस्था आफैँमा जटिल समय हो । गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै ख्याल गर्नुपर्छ । विशेषगरी, खानपानमा सचेत हुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा हानि पुग्दैन । गर्भवतीले कुन खानेकुरा खाने वा नखाने भन्नेबारे ...
रोमान्चक र सुरक्षित यौन जीवनका लागि प...
मंसिर १२, 2075 काठमाडौं । दम्पतीबीचको सक्रिय यौन जीवनले उनीहरुको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । सक्रिय यौनले हृदयघातको जोखिम कम गर्नेदेखि डिप्रेसनबाट छुटकारा दिलाउनेसम्मको फाइदा बताइन्छ । यौन सम्पर्कलाई कसरी रोमान्चक र सक्रिय ...
नेपालगञ्जमा अहिले सम्म धेरैको आखाँ शल...
मंसिर ११, 2075 नेपालगञ्ज । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित फत्तेबाल आँखा अस्पतालले अहिलेसम्म दुई लाख २८ हजार ६६५ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको छ । अस्पतालका प्रबन्धक कौशलकुमार वर्माका अनुसार ३२ वर्षको अवधिमा अस्पतालले २० लाख ४६ ...
पर्फेक्ट सेक्स पार्टनर कसरी बन्ने ? य...
मंसिर १०, 2075 काठमाडौं । यौन जीवनको एक आवश्यकता मात्रै होइन यो एक कला पनि हो । संसारमा हरेक मानिस यौन कलामा पारंगत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर, केही कुरालाई ध्यानमा राखेमा यसमा सजिलै निपुणता हासिल गर्न सकिन्छ । आम रुपमा जोडीले एक अर्काला...
← अघिल्लो 12… 46 47 48 49 50 51 52 53 54 … 83 84 पछिल्लो →